sindhupalchok | Ratopati
सिन्धुपाल्चोकका नौ स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी access_timeबैशाख २२, २०७८
सिन्धुपाल्चोक । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै सिन्धुपाल्चोकका नौ स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । जिल्ला कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले तीन नगरपालिकासहित ६ गाउँपालिकामा निषेधाज्ञा गरेको हो । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, बाह्रबिसे नगरपा...
सिन्धुपाल्चोकमा किन जान्छ लगातार बाढी–पहिरो ? access_timeभदौ २८, २०७७
काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको माङ्खा र राम्चेको सीमा क्षेत्र जुरेको पहिरोले त्यहाँका स्थानीयलाई गहिरो घाउ लगाएर गयो । ०७१ साउन १७ मा १४५ जनाको मृत्यु भएको सो पहिरो सम्झेर अहिले पनि त्यहाँका स्थानीय झस्किन्छन् । सिन्धुपाल्चोकलाई त्यसयता हरेक वर्ष बाढी–पहिरो जस्ता ...
लिदी पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ३७ पुग्यो, अझै २ जना वेपत्ता access_timeभदौ १६, २०७७
चौतारा । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नं २ लिदीमा गत साउन ३० गते गएको पहिरामा पुरिएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३७ पुगेको छ । सत्र वर्षीय सुवास पाख्रिनको शव आज भेटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । पहिरोमा बेपत्ता दुई जनाको नेपाली स...
सिन्धुपाल्चोकमा निषेधाज्ञालाई निरन्तरता access_timeभदौ १४, २०७७
सिन्धुपाल्चोक । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले निषेधाज्ञालाई पुनः तीन दिन थप गरेको छ । यही भदौ १ गतेदेखि लागू गरिएको निषेधाज्ञालाई जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको आज बसेको बैठकले भदौ १७ गते राति १२ बजेसम्म लागु हुने गरी निरन्तरता दिएको प्रमुख जिल्ला अधिक...
सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोले चार घर पुरिए access_timeभदौ १४, २०७७
काठमाडौँ । गएराति सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका–६ धुसेनीमा गएको पहिरोले चार घर पुरिएको छ । पहिरोले स्थानीय खिल बहादुर भण्डारीको २ घर, इबबहादुर भण्डारी र चेतबहादुर भण्डारीको १/१ घर पुरेको स्थानीय भुपेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । पहिरो अन्य ८ घर आशिं...
सिन्धुपाल्चोकमा एकसाता लकडाउन थप access_timeभदौ ७, २०७७
सिन्धुपाल्चोक । छिमेकी जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण बढेको र जिल्लामा पनि सङ्क्रमण बढ्न सक्ने देखिएकाले सिन्धुपाल्चोकमा यही भदौ १ गतेदेखि जारी लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । आइतबार बसेको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले यही भदौ १४ गते सम्मका लाग...
लिदी पहिरोः मृतकको संख्या २९ पुग्यो access_timeभदौ ४, २०७७
सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका वडा नं २ लिदीमा शुक्रबार गएको पहिरामा पुरिएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २९ पुगेको छ । आज १८ वर्षीया ललिता दोङ, ४२ वर्षीया बिबीरानी दोङ, पाँच वर्षीय सानुकान्छा दोङ र ४४ वर्षीय हीराबहादुर दोङको शव भेटिएपछि मृतकको सङ्...
वर्षेनी सिन्धुपाल्चोकमाथि नै किन यस्तो बज्रपात ? access_timeभदौ १, २०७७
काठमाडौँ । विसं २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो पारेको सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी प्राकिृतक विपत्ति र दुर्घटनाले झन ठूलो पीडा थपिदिएको छ । प्रकृतिले दिएको विपत्तिले यहाँ ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । भूकम्प, बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिले नपुगेर अझै यहाँ सडक तथा हवाई ...
लिदी पहिरोमा परेका २२ जनाको शव फेला access_timeभदौ १, २०७७
सिन्धुपाल्चोक । शुक्रबार बिहान जुगल गाउँपालिका–२ लिदीमा गएको पहिरामा परेका २२ जनाको शव फेला परेको छ । आज बिहान थप तीन जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । आज वर्ष २२ का छविल...
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सिन्धुपाल्चोक उत्कृष्ट access_timeसाउन १३, २०७७
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले हरेक वर्ष गर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक ‘क’ वर्गमा पर्न सफल भएको छ । गृह मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार सिन्धुपाल्चोक यो वर्ष अति उत्तम ‘ए’ मा पर्न सफल भएको हो । गृह मन्त्रालयका सचि...
यस्तो छ सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोको वितण्डा, हराएका १६ जनाको खोजी कार्य जारी (भिडियो) access_timeअसार २६, २०७७
सिन्धुपाल्चोक । बुधबार बाह्रबिसे नगरिपालिका वडा नम्बर ५ कि स्थानीय सानुमाया माझी खेत रोप्न गएकी थिइन् । रोपाई सकेर घर आइपुगेपछि साँझ साढे ५ बजेदेखि मुसलधारे पानी पर्न थाल्यो । अविरल आएको पानीपछिको बाढीले रोपेको खेत पनि बगायो । राती ११ बजे जमिन थर्किदै ठूलो...
सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा पहिरो, १ जना बेपत्ता, ८ घरमा क्षति access_timeअसार २६, २०७७
चौतारा । अविरल वर्षासँगै आज बिहान आएको बाढी र पहिरोले भोटेकोशी गाउँपालिका– २ लार्चामा एक जना बेपत्ता र आठ घरमा क्षति पुगेको छ । भैरवकुण्ड खोलामा आएको बाढी र पहिरोले एक जना बेपत्ता भएको, तीन घर बगाएको र तातोपानी बजारका पाँचघर पहिरोले पुरिएको गाउँप...
बाढीले मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र डुबानमा access_timeअसार २५, २०७७
सिन्धुपाल्चोक । बुधबार राति सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्र डुबानमा परेको छ । निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको सो हाइड्रोपावरमा अर्बौंको क्षति पुगेको छ । एक जना चिनियाँ प्राविधिक बेपत्ता भएको आयोजना प्रमुख सुनिलकुमार लामाले ज...
६० रुपैयाँको औषधि २ हजार ४०० मा बिक्री ! access_timeअसार २०, २०७७
मेलम्ची । सिन्धुपाल्चोकका केही औषधि पसलले लकडाउनको फाइदा उठाउँदै वढी मूल्य लिई औषधि विक्री गरेको भेटिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र बाह्रबिसे नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाको समन्वयमा बाह्रबिसे नगरपालिकाका बजार क्षेत्रका औषधि पसलमा शुक्रबार गरिएको अनुगमनका क्...